बाह्य चुम्बकीय शक्तीको आकर्षण र लम्पसारवाद - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
- सुरेश गौतम
मानव सभ्यतामा सवैभन्दा उचो नाम भएका अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका छन् ‘यो संसारमा भगवान छ कि छै त्यो मलाई थाहा छैन तर विधि र विधान छ । सवै कुरा विधि र विधानमा चलेको हुन्छ ।’ यो हामीले पत्ता लगाएको कुरा होइन । अल्बर्ट आइन्स्टाइनले जिन्दगी भरको समय लगाएर पत्ता लगाएको विचार हो । उनले भनेका छन, ब्रहमाण्डमा पनि विधि र विधान छ । जस्तै सूर्य पनि विधि र विधान चलिरहेको छ । यदी विधि र विधानमा नचल्ने हो भने यो ब्रहमाण्डमा के होला ? पृथ्वीले कहिले सूर्यलाई घुम्ने कहिले अर्कोलाई घुम्ने भए के होला ? त्यसैले सवै सिस्टममा चलिरहको हुन्छ ।
संविधानसभावाट ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेर पास गरेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा एक वर्ष नवित्दै नेपाली जनता र संविधानको भावना विपरित प्रदेश नम्बर पाँचलाई अर्काको इसारामा विभाजन गर्ने जुन कार्य प्रचण्ड र देउवाले गरेका छन ।
यो विचार सवै क्षेत्रमा लागु हुन्छ । त्यसमा पनि अहिले प्रचण्ड र देउवाले यस विचारको राम्रो अध्ययन गुर्नपर्ने छ, किनकी संविधानसभावाट ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेर पास गरेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा एक वर्ष नवित्दै नेपाली जनता र संविधानको भावना विपरित प्रदेश नम्बर पाँचलाई अर्काको इसारामा विभाजन गर्ने जुन कार्य प्रचण्ड र देउवाले गरेका छन । यो सरासर विधि र विधानलाई मिचेका छन् ।
यहाँ प्रचण्ड र देउवाले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता,स्वाधीनता र स्वाभिमानलाइ बन्धक राखेर नेपालको संविधानको विधि र विधानलाई चुनौती दिएर वैज्ञानिक विचार माथी प्रहार गरेका छन् । जसले गर्दा नेपाल राष्ट्र र नेपाली समाजलाई उल्टो वाटोमा हिडाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसको जानकारी लिनको लागि पनि आम देशभतm नागरिक एमालेको जनप्रर्दशमा आफ्ना सिर्जनशील हातहरुले नेपाली झण्डा वोकेर आफ्नो सहभागिता जनाउन अति आवश्यक छ ।
मानिस यो धर्तिमा ४० लाख वर्ष देखि विध्यमान छन् । यो ४० लाख वर्षलाई चिरेर यहाँ सम्म आउनलाई मानिसहरुले शिकारी समाज ,कृषि समाज,औद्योगीक समाज हुदैं सूचना तथा प्रविधि समाजमा मानिस आइपुगेको छ । मानिसहरुले यि तिन चरणवाट पार गरेर अहिलेको चरणमा आईपुग्दा धेरै राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनलाई सामाना गर्दै अहिले विज्ञान र प्रविधिको सामाजिक आन्दोलनमा विश्वका मानिसहरु अगाडि वढिरहेको वेलामा प्रचण्डले कृषि समाजको आन्दोलनको कुरा गरिरहेका छन र भनिरहेका छन ‘यो देशमा जातिय राज्य चाहियो ।’ जुन विषयमा नेपाली जनताले जातीय राज्यलाई दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा अस्वीकार गरिसेका छन् ।
प्रचण्डले ४० लाख पछाडीको काम नलाग्ने सिद्धान्त वोकेर उफ्रीरहेका छन् । यस्तो सिद्धान्तका पछाडि लाग्ने हो भने नेपाली समाज कहाँ पुग्ला ?
अहिले प्रचण्ड देउवालाई साँची राखेर सारा नकारात्मक इतिहासलाई वोकेर नेपाली जनतालाई पहाड र मधेसको नाममा भ्रम फिजाएर चार खुट्टाले टेक्ने वाँदरको पूर्खावाट दुई खुट्टाले टेक्ने वादरको पूर्खामा रुपान्तरण भइसकेको समाजलाई फेरी चार खुट्टाले टेक्ने वादरको पूर्खामा समाजलाई परिर्वतन गर्न खोज्दै छन् अर्थात प्रचण्ड र देउवा ४० लाख पछाडिको इतिहासमा जान खोज्दैछन । अव एमाले ४० लाख पछाडिको इतिहासमा जान चाहदैन । २१ औ शताब्दीको सामाजिक आर्थिक विकासको अवधारणा अर्थात सकारात्मक इतिहास वनाउने वाटोमा एमाले जाँदैछ । जसको लागि प्रचण्ड र देउवाले ल्याएको संविधानको संसोधनको कुनै औचित्य छैन । यसको खारेज तुरुन्तै हुनुपर्छ ।
प्रचण्डले ४० लाख पछाडीको काम नलाग्ने सिद्धान्त वोकेर उफ्रीरहेका छन् । यस्तो सिद्धान्तका पछाडि लाग्ने हो भने नेपाली समाज कहाँ पुग्ला ? यस्ता सिद्धान्तका पछाडि अव जनता लाग्नु हुदैन यसको विरोधका लागि पनि आम नागरिक सडकमा आउनै पर्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमान माथि प्रहार गर्ने जुन डिजाईनमा प्रचण्ड र देउवालाई वाहिरी शक्तिले आकर्षण गरिरहेको छ । यो हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताका लागि स्वीकार्य हुनेछैन । प्रचण्ड र देउवालाई जुन चुम्बकले आकर्षण गरिरहेको छ त्यो फलाम हो अर्थात लम्पसारवाद हो ।
आकर्षणको सिद्धान्त अनुसार चुम्बकले फलामलाई पनि आकर्षण गर्छ भने सुन र हिरालाई पनि आकर्षण गर्छ । अर्थात जो नजिक छ, त्यसैलाई आकर्षण गर्छ आकर्षण सिद्धान्तले भने जस्तै अहिले हाम्रो युगमा सवै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो त्यो पत्ता लगाएर आकर्षण गर्ने वेलामा नेपालको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमान माथि प्रहार गर्ने जुन डिजाईनमा प्रचण्ड र देउवालाई वाहिरी शक्तिले आकर्षण गरिरहेको छ । यो हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताका लागि स्वीकार्य हुनेछैन । प्रचण्ड र देउवालाई जुन चुम्बकले आकर्षण गरिरहेको छ त्यो फलाम हो अर्थात लम्पसारवाद हो ।
प्रचण्ड र देउवाले सुन र हिरालाई अर्थात नेपाली जनतालाई आकर्षण गर्न सकिरहेका छैन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण प्रदेश नम्बर पाँचको जनताको आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ । जसमा प्रचण्ड र देउवाका नेता कार्यकर्ता पनि एमालेको झण्डामा आएका छन् ।
आज विश्वका धेरै देशहरु किन विकसीत भए भन्दा उनीहरुले निर्भरतालाई त्याग्ने आँट गरेर मेरो देश म आफै वनाउछु भन्ने अवधारणा लागु गरे र त्यसै अनुसारको योजना,नीति निर्माण गरे अनि सफल भए यो आर्थिक विकासको सफल इतिहासवाट एमालेले नेपाललाई बदल्ने ठोस योजना सहित अगाडि जाँदै थियो, त्यसैवेला प्रचण्ड र देउवालाई निन्द्रा लाग्न छाड्यो अनी षडयन्त्रको जालो वुनेर संविधानको संसोधनको नाममा नेपाललाई विलय वनाउने काममा प्रचण्ड र देउवा कसैको गोटी वन्दै छन् । यसप्ररकारको षडयन्त्रलाई विफल वनाउन पनि एमालेको जनप्रदर्शनमा आम नागरिक जानुपर्ने छ ।
लेखक नेकपा एमालेको युवा तथा खेलकुद केन्द्रीय विभागका सदस्य हुन ।